Nlereanya Gamer oche Model 1501-3 Onye nrụpụta na onye na-ebubata |Ụba abụọ
Onye isi oche Model P005
Nlereanya oche ịgba ọsọ 1501-4
Ihe nlere oche Gamer 1501-3
Nlereanya oche egwuregwu 1709-S
Eletrik ịdị elu kemeghi mgbanwe kọmputa oche nlereanya Mo...
Ebuli oche ụdị pụrụ iche Model HA-02
Ụdị oche egwuregwu akụ na ụba R GT-01
Tebụl Gamer 140cm nwere ụkwụ T shpe na pad òké Mod ...
Agba:Oji + uhie + ọcha
Ihe:PU Akpụkpọ anụ
Akụkụ akụkụ LxWxH:22 x 23 x 50 sentimita asatọ
Ụfụ Ụfụ Oyi: Igwe ụfụfụ oyi na-eme ka ahụ ruo gị ala.
Ihe onwunwe dị elu: Akpụkpọ anụ PU dị nro, oche oche agbakwunyere, na oche oche lumbar & isi isi na-enye nkwado na nkasi obi.Isi ọrụ dị arọ na ihe nkedo na-agbagharị naịlọn maka nnukwu nkwụsi ike na ngagharị.
Mgbakọ dị mfe: oche ịgba chaa chaa dị mfe ijikọ ọnụ.Anyị ọrụ oche Ọdịdị bụ nnọọ mfe.Just na-eso ntụziaka na-amalite na-ekpori ndụ ọhụrụ gị oche na-erughị 15 nkeji oche anyị na-abịa njikere na-ezukọta, na niile ngwaike na mkpa ngwaọrụ.
Ihe onwunwe dị oke mma
Akpụkpọ anụ PU dị nro, ihe nkwụnye oche agbakwunyere, na oche oche lumbar & ohiri isi na-enye nkwado na nkasi obi agbakwunyere.
Oche egwuregwu abụọ
Oche egwuregwu YTWOBLOW OLENY
PU akpụkpọ anụ
Enwere ike idozi ịdị elu
90 ~ 135° na-anọdụ ala
Ogologo oge ole ka oge nnyefe dị?
Kedu ihe bụ MOQ?
20f akpa ike banyere 200 iberibe.
Ngwungwu gị nwere ule ọdịda dị elu?
Ee, ngwugwu anyị nwere 60cm ịdị elu na-ada ule.
Kedu mgbe m nwere ike nweta nhota ahụ?
Anyị na-ehotakarị n'ime awa 6 ka anyị nwetachara ajụjụ gị.
Site na usoro a pụrụ ịdabere na ya, aha ọma na ọrụ ndị ahịa zuru oke, a na-ebupụ usoro ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị na-ebuga n'ọtụtụ mba na mpaghara maka ezigbo mma China Luxury Gamer Office Computer Chair PU Akpụkpọ anụ Gaming oche oche oche Swivel oche na Armrest, Ụlọ ọrụ anyị bụ isi ihe. Ụkpụrụ: The ugwu mbụ ;The ọkọlọtọ nkwa ;Ndị ahịa bụ kasị elu.
Good quality China Ịgba Cha Cha oche, okomoko Ịgba Cha Cha oche, Anyị ụlọ ọrụ na-ewu kwụsiri ike azụmahịa mmekọrịta na ọtụtụ ọma ụlọ na ụlọ ọrụ nakwa dị ka esenidụt ahịa.N'ebumnobi nke ịnye ndị ahịa ngwaahịa dị elu n'obere akwa akwa, anyị etinyela aka n'ịkwalite ikike ya na nyocha, mmepe, nrụpụta na njikwa.Anyị asọpụrụla ịnata nnabata n'aka ndị ahịa anyị.Ụlọ ọrụ nke "àgwà nke nlanarị, ntụkwasị obi nke mmepe" maka nzube ahụ, ji ezi obi na-anabata ndị ọchụnta ego ụlọ na ndị mba ọzọ ka ha gaa na-ekwurịta banyere imekọ ihe ọnụ.
Nke gara aga: Nlereanya oche egwuregwu 1709-S
Osote: Nlereanya oche ịgba ọsọ 1501-4
Oche egwuregwu ugboro abụọ
oche Ịgba chaa chaa Elite
Nitro Gaming oche
Oche Egwuregwu Ohaho
Oche Ịgba chaa chaa kacha elu
Onye isi oche egwuregwu Vortex
Ihe Nlereanya Economy oche 1709-O
Ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ na mmepụta na mmepe nke ngwá ụlọ na-asọmpi eletrọnịkị ọkachamara, gụnyere isi ihe atọ: tebụl egwuregwu, oche na-ebuli elu na oche egwuregwu.
Adreesị: Ejikọtara onwe ya No. 1, Foshan Zifeng Plastic Industry Co., Ltd., Nke 6, South nke West Jixiang Road, Jitingwei, Pingnan Industry Zone, Pingzhou, Guicheng Subdistrict, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China
Njikọ enyi na enyi:
© Nwebiisinka 2021: Ikike niile echekwabara.